NJANI (KWAYE KANINZI KANGAKANANI) KUFUNEKA UCOCE IRACK RACK YAKHO - LUNGELELANISA KWAYE UCOCE
Kukangaphi ufuna ukucoca iRack Rack yakho, ngokwePro House Cleaner
Sixhomekeke kwizitya zokumisa izitya ukukhupha izitya zethu ezisandul 'ukucocwa, kodwa wenza ntoni xa isitya sakho sesitya siqala ukungcola?
Sibethe uKadi Dulude, umseki we Wizard yaMakhaya Ukufumanisa ukuba kukangaphi kufuneka sicoce iirack zethu zokutya kunye nendlela yokwenza oko xa kufika ixesha.
Ke, kuya kufuneka sihlambe kangaphi iirack zethu zokutya?
Ngokuka-Dulude, kuyakufuneka uyicoce ngeveki ukuba ufuna ukuthintela ukungunda ekukhuleni kwasekuqaleni. Ukuba uyayibona ibumbana ngokukhawuleza, kuya kufuneka uyicoce rhoqo, utshilo. Ngokufanelekileyo, uya kunika ukucoceka ngokukhawuleza rhoqo xa kungenanto kwaye unokuhlanjululwa ngokulula.
I-OXO iGrips elungileyo yeDish Brush$ 5.99IAmazon Thenga ngoku
Uyicoca njani indawo yokubeka izitya?
Isepha rhoqo yesitya kunye ibrashi yokuhlamba izitya izakusebenza kakuhle. Ukuba uqhubeka nayo, awusoze ufune ukuyikhuhla kakhulu, utshilo uDulude. Nantsi indlela yakhe ekucetyiswa ngayo: Okokuqala, yithabathe kangangoko kunokwenzeka. Emva koko bhrasha okanye uhlikihle amabala amancinci angwevu aphucukileyo, hlamba ngamanzi ashushu kakhulu, kwaye uwushiye esinkini ukuze wome ngokupheleleyo.
Funda ngokugqithisileyo: Uyicoca njani iRack Dish kwiDishwasher
Yintoni omele uyenze xa ubona okanye ujoja isikhunta kwisitya sakho sokutya?
UDulude uthi uhlambe kwaye uhlambe isitya sezitya ngokukhawuleza, kwaye ungasisebenzisi kwakhona de sicoceke ngokufanelekileyo. Into yokugqibela oyifunayo xa ujikeleze izitya zakho ezicocekileyo ngumngundo.
U-Dulude ucinga ukuba umhlwa kwisitya sesitya sentsimbi luphawu lokuba lixesha lokuthatha umhlala phantsi kukhenketho olungenamanzi kangako: Iya kuqala ibala kwaye iya isiba mandundu ngokuhamba kwexesha. Ukusetyenziswa kakuhle kwesitya esidala sokutya kungayifaka ngaphakathi kwiikhabhathi zakho kwaye uyisebenzise njengomququzeleli wembiza!
Isakhelo seDreyini elula yoLuntu$ 79.99IAmazon Thenga ngoku
Ngaba ezinye izitya zokutya zicocekile kunezinye?
Ukuba usemarikeni enye, uDulude ucebisa ukuba ukhangele imodeli engayi kuxhoma emanzini. Ngokufanelekileyo ubuya kuba nesitya sokutya esinokuntywila esinkini ngaphandle kokuba wenze nantoni na, utshilo. Ukuba isitya sakho siqokelela amanzi emva koko kuya kufuneka ukuba umise izitya zakho kwaye uchithe yonke imihla ukuze ukhuphe kwaye womise ingqokelela yamanzi phantsi. Ukuba awuyenzi loo nto, ke ukungunda kuya kuqala ngokulula ukukhula kanye apho ugcina khona izitya zakho ezicocekileyo.
Funda ngokugqithisileyo: Eyona Dish Racks ilungileyo yokuthenga ngo-2019
16, x 18, Dish Ukuqwayita Mat$ 6.99IAmazon Thenga ngoku
Ngaba kukho naziphi na iimfihlo zokumisa isitya ozisebenzisayo ekhaya?
Ngokwam, ndisebenzisa iikomityi ezimbini zokomisa izitya ezifana Le , utsho uDulude. Enye ihlala isomisa (ijinga emnyango we-oveni) kwaye enye ihlala isetyenziswa. Xa izitya zomile emoyeni, ndiye ndizibeke kude (ndizipolishe okanye ndizomise xa kufuneka njalo) kwaye ndirhweba ngazo okanye ndixhome umatriki. Nanini na xa ndibona iimpawu zomatshini wokungcola ziba mdaka, ndiyiphosa nje kwi-washer kwaye isonjululwe ingxaki.
Enye yeendlela eziPhambili zokuPhucula iKhaya lakho yi-Do-able on a Day
Into endiyifumanayo endaweni yalezo zimbi zasekhitshini ezinesono
Ngaba ungayihlawulisa iLaptop ngePort USB?
11 11 intsingiselo yothando
Ithetha ntoni i-911
Kutheni ndihlala ndibona 911
qhubeka ubona 11 11